၂မိနစ်​​တောင်​ မကြာလိုက်ဘူး… ရှိတာတွေ အကုန်ယူသွားကြတဲ့… မန်းလေးက ကုသိုလ်ဖြစ် အစားအစာ Box 😢😢(ရုပ်သံ) – ရှအေလငျး
မရှိဆင်းရဲသူ နွမ်းပါးသူတွေ အတွက် ..ရည်ရွယ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပေမယ့်…
ဒီလို အလေ့အထနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လေ့ မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါကို အလှူလုပ်တယ်ထင်ပြီး ဝင်ယူသွားလိုက်ကြတာ.. ၂ မိနစ်တောင် မကြာလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာ..
ယူလိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။
မြန်မာဓလေ့မှာ.. စတုဒီသာ..နိဗ္ဗာန်ဈေးဆိုတာ.. အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ပါဝင်နိုင်တဲ့ ဓလေ့မဟုတ်လား..
ဒါကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတော့.. ဒီလိုပဲ ထင်ပြီး ယူကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
နောက်များဆို.. အစားအစာ BOX အလှူ… မရှိဆင်းရဲပြီး..နွမ်းပါးသူ.. အိမ်ယာမဲ့သူတွေအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်လို့..ရေးထားရင်တော့.
ရနိုင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ..နဂိုကတည်းက ငဲ့ညှာသနားတတ်တဲ့ စိတ်ရှိသူတွေ ပါ..။
မရှိဆငျးရဲသူ နှမျးပါးသူတှေ အတှကျ ..ရညျရှယျပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ လုပျရပျဖွဈပမေယျ့…
ဒီလို အလအေ့ထနဲ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျလေ့ မရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒါကို အလှူလုပျတယျထငျပွီး ဝငျယူသှားလိုကျကွတာ.. ၂ မိနဈတောငျ မကွာလိုကျပါဘူးခငျဗြာ..
ယူလိုကျတဲ့သူတှကေိုလညျး အပွဈလို့ မဆိုသာပါဘူး။
မွနျမာဓလမှေ့ာ.. စတုဒီသာ..နိဗ်ဗာနျဈေးဆိုတာ.. အယုတျအလတျအမွတျမရှေး ပါဝငျနိုငျတဲ့ ဓလမေ့ဟုတျလား..
ဒါကို ရငျးနှီးကြှမျးဝငျနတေော့.. ဒီလိုပဲ ထငျပွီး ယူကွတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ..
နောကျမြားဆို.. အစားအစာ BOX အလှူ… မရှိဆငျးရဲပွီး..နှမျးပါးသူ.. အိမျယာမဲ့သူတှအေတှကျသာ ဖွဈပါသညျလို့..ရေးထားရငျတော့.
ရနိုငျကောငျးမယျထငျပါတယျ..။ မွနျမာလူမြိုးဆိုတာ ..နဂိုကတညျးက ငဲ့ညှာသနားတတျတဲ့ စိတျရှိသူတှေ ပါ..။
သောက ပေါင်းများစွာ နဲ့ သားပျောက် ရှာနေတဲ့ ဖခင် တစ်​ဦးရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုး
ရာဇ၀တ်မှုနှင့် စွပ်စွဲခံရပြီး မတရားခံရသူတွေအတွက် ရှေ့နေငှားဖို့တောင်...